Blog - Myanmar Sports
Chelsea ကနေ ထွက်ခွာသွားရဖွယ်ရှိနေတဲ့ ကစားသမားများ
ကစားသမားအသစ်တွေ ခေါ်ယူပြီးတာနဲ့ ရောင်းချခံရနိုင်တဲ့ Chelsea [ ချဲလ်ဆီး ] ကစားသမားများ Chelsea [ ချဲလ်ဆီး ] အသင်းဟာ လိဒ်အသင်းရဲ့ ဘရာဇီးလ်တောင်ပံတိုက်စစ်ကစားသမား ရာဖင်ညာကို ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ မန်စီးတီး တောင်ပံတိုက်စစ် ရာဟင်း စတာလင်ကိုလည်း ခေါ်ယူနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ချဲလ်ဆီး ကစားသမားတိုင်းကတော့ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ပြီး အောင်ပွဲခံကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ လာမယ့်ရာသီမှာ မန်စီးတီးနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းတို့နောက် အမှတ်ကွာခြားချက်တွေကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။ အခုချိန်မှာ အသင်းကို ပိုင်ရှင်သစ် တော့ဒ် ဘိုလီရဲ့ လွှဲပြောင်းရယူမှု အပြီးသတ်သွားတာကြောင့် နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ်ဟာ အသင်းအင်အားကောင်းလာဖို့ အာရုံစိုက်လာနိုင်ပြီ
Categories: Football, အားကစားသတင်းများ Tags: Callum Hudson-Odoi, Chelsea, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Timo Werner, transfer news | Comments
Takumi Minamino ရဲ့ မိုနာကို ကစားသမားဘဝဆီသို့။
လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ကွင်းလယ်လူ Takumi Minamino [ မီနာမီနို ] ကို မိုနာကိုအသင်းဆီ အပြီးသတ် ရောင်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Takumi Minamino [ တာကူမီ မီနာမီနို ] ဟာ မိုနာကိုအသင်းဆီ အမြဲတမ်းအပြောင်းအရွှေ့ကို အပြီးသတ်လိုက်ပြီလို့ လီဗာပူးလ်အသင်းက အတည်ပြုလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တာကူမီ မီနာမီနိုဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နွေရာသီမှာ Red Bull Salzburg အသင်းကနေ ပြောင်းရွှေ့လာပြီးနောက် လီဗာပူးလ် ကစားသမားအဖြစ်နဲ့ စုစုပေါင်းနှစ်ရာသီကျော် ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ လီဗာပူးလ် ကြယ်ပွင့် ကစားသမားတွေကြားမှာ ပုံမှန် နေရာတစ်ခု ရရှိဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုမှာတော့ မိုနာကိုအသင်းဆီ
Categories: Football, အားကစားသတင်းများ Tags: AS Monaco, Liverpool, Takumi Minamino, transfer news | Comments
De Jong ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်ရွှေ့ဖို့ တော်တော်နီးစပ်လာပြီ။
Frenkie De Jong [ ဖရန့်ကီ ဒီဂျောင် ] ဟာ ​​မန်ယူအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဘယ်လောက်နီးစပ်နေပြီလဲ? De Jong [ ဖရန့်ကီ ဒီဂျောင် ] ဟာ အခုနွေရာသီမှာ ဘာစီလိုနာကနေ ထွက်ခွာဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ သူ့ကို အေဂျက်စ်အသင်း နည်းပြဟောင်း အဲရစ်တန်ဟက်ဂ်က မန်ယူအသင်းဆီ ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါးအသင်းဟာ အဲဗာတန်တိုက်စစ်မှူး ရစ်ချာလီဆင် ဟယ်ရီကိန်းနေရာအတွက် အရန်ကစားသမား ရှာဖွေရာမှာ သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေအတွက် အဖြေအဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ ဂိုးအရေအတွက်နဲ့ တခြားအလုံးစုံစွမ်းရည်တွေကြောင့် မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ဟာ ကိန်းရဲ့ နေရာနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးကို
Categories: Football, အားကစားသတင်းများ Tags: Barcelona, Frankie De Jong, Manchester united, transfer news | Comments
Ronaldo – ယူနိုက်တက်ကနေ ထွက်ခွာတော့မှာလား?
ရော်နယ်ဒို [ Ronaldo ] သာ ယူနိုက်တက်ကနေ ထွက်သွားခဲ့ရင် ပြောင်းရွှေ့နိုင်တဲ့ အသင်း (၄) သင်း။ Ronaldo [ရော်နယ်ဒို] က မန်ယူအသင်းကနေ ထွက်ခွာလိုကြောင်း အရိပ်အမြွက် ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အေးဂျင့် ဖြစ်တဲ့ ဂျော့ရှ် မန်းဒက်စ်က သူ့ကို နောက်ထပ် ကလပ်အသင်းလေးခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် စူပါစတား ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒိုဟာ အခု နွေရာသီမှာ သူ့ရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် စဥ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူ့ရဲ့ အားကစား အေးဂျင့်ဖြစ်သူ ဂျော့ရှ် မန်းဒက်စ်က ပြောင်းရွှေ့ဖို့
Categories: Football, အားကစားသတင်းများ Tags: Cristiano Ronaldo, Manchester united, transfer news | Comments
Kalvin Phillips ရဲ့ မန်စီးတီးနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့
[ကယ်လ်ဗင် ဖီးလစ်စ်] Kalvin Phillips ရဲ့ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ရလဒ်များ Kalvin Phillips [ကယ်လ်ဗင် ဖီးလစ်စ်] ကို ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နေတာကြောင့် မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းဟာ သူတို့ရဲ့ နောက်ထပ် အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စရပ်တွေကို အပြီးသတ်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ လိဒ်စ် ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ဖီးလစ်ဟာ အခုရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီးအသင်းများစွာရဲ့ အလိုရှိနေတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၄၅ သန်းဝန်းကျင်တန် စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးစေနိုင်မယ့် အသင်းတစ်သင်းကတော့ မန်စီးတီးအသင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဟာ သာမန် ကစားသမား ခေါ်ယူ လွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဘယ်သူတွေက အကျိုးအမြတ် ရရှိပြီး တခြား
Categories: Football, အားကစားသတင်းများ Tags: Arsenal, Gabriel Jesus, Kalvin Phillips, Man City, transfer news | Comments
Richarlison စပါးအသင်းကို ပြောင်းမှာလာ?
Richarlison [ရစ်ချာလီဆန်]က ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ အရန်ကစားသမား ဖြစ်လာနိုင်သလား? Richarlison [ရစ်ချာလီဆင်] သာ စပါးအသင်းကို ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင် မူရင်း ပင်တိုင်တိုက်စစ်မှူး ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ နေရာအတွက် အရန်ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါးအသင်းဟာ အဲဗာတန်တိုက်စစ်မှူး ရစ်ချာလီဆင် ဟယ်ရီကိန်းနေရာအတွက် အရန်ကစားသမား ရှာဖွေရာမှာ သူတို့ရဲ့ အခက်အခဲတွေအတွက် အဖြေအဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဟယ်ရီကိန်းရဲ့ ဂိုးအရေအတွက်နဲ့ တခြားအလုံးစုံစွမ်းရည်တွေကြောင့် မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ဟာ ကိန်းရဲ့ နေရာနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးကို ဆွဲဆောင်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ 1xBet အကောင့်အသစ် ဖွင့်သူများအနေနဲ့ Promo code (ပရိုမိုကုဒ်) 👉 MMSPORT100 👈 ကိုအသုံးပြုတာနဲ့ 100% ဘောနပ်စ်
Categories: Football, အားကစားသတင်းများ Tags: Everton, Harry Kane, Richarlison, Tottenham Hotspur, transfer news | Comments
Anthony ရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးက ဘယ်လောက်ရှိမလဲ?
မန်ယူအသင်းရဲ့ ပစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ Anthony [အန်တိုနီ ] နဲ့ တင်းဘားတို့အတွက် အေဂျက်စ်က ဘယ်လောက်တောင်းဆိုမလဲ? Anthony [အန်တိုနီ] နဲ့ နောက်ခံလူ ဂျူရီယန် တင်းဘားတို့ကို ခေါ်ယူချင်နေတဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အေဂျက်စ်အသင်းအနေနဲ့ ချေပဖို့ ရည်ရွယ်ထားပုံရပါတယ်။ အမ်စတာဒမ်အသင်း [ အေဂျက်စ်အသင်း ] ဟာ အခုနွေရာသီမှာ သူတို့ရဲ့ နည်းပြဟောင်း အဲရစ်တန်ဟက်ကို မန်နေဂျာအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ အိုထရတ်ဖို့ဒ်ကလပ်ဆီက ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ငြင်းဆိုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Eredivisie [ ဟော်လန်လိဂ် ] ချန်ပီယံတွေဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဆီ Ryan Gravenberch [ ရိုင်ယန် ဂရာဗန်ဘာ့ချ် ]ကို အပြီးသတ်ရောင်းချပြီးနောက် အခုနွေရာသီမှာ
Categories: Football, အားကစားသတင်းများ Tags: Ajax, Anthony, Timber, transfer news | Comments
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းက Sadio Mane [ ဆာဒီယိုမာနေး ] ကို ခေါ်ယူလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Mane [ ဆာဒီယိုမာနေး ] ဟာ လီဗာပူးလ်အသင်းကနေ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ခေါ်ယူဖို့ ဂျာမန်ချန်ပီယံအသင်း‌က ယူရို ၄၁ သန်းထိ ကုန်ကျမှုနဲ့ အပြီးသတ် သဘောတူညီမှု ရရှိသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်စစ်မှူး ဆာဒီယို မာနေးဟာ ဘွန်ဒက်လီဂါချန်ပီယံအသင်းနဲ့ ၂၀၂၅ ခုနှစ်ထိ သုံးနှစ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။ ဆီနီဂေါတိုက်စစ်မှူးဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဆီကနေ ကမ်းလှမ်းမှုများအများအပြားရှိခဲ့ပေမယ့် လီဗာပူးလ်အသင်းဘက်က ဆက်လက်ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ လီဗာပူးလ်အသင်းက ပြောင်းရွှေ့ကြေးတစ်ရပ်နဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီး မာနေးကို
Raheem Sterling ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့
ချယ်ဆီးအသင်းက Raheem Sterling [ ရာဟင် စတာလင် ] နဲ့ ကစားကွက် ဘယ်လိုချမလဲ? Raheem Sterling [ ရာဟင် စတာလင် ] ကို ယူရို သန်း ၄၀ ‌အောက်နဲ့ ချဲလ်ဆီးအသင်းက ခေါ်ယူဖို့ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရာဟင် စတာလင်ရဲ့ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ စာချုပ်ဟာ ၂၀၂၃ ခုနှစ် နွေရာသီမှာ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းဟာ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ကစားသမားကို အခုနွေရာသီမှာ ရောင်းချရမယ် ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ တစ်နှစ်တာအတွင်း သူ့ကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတာကို သိရှိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Categories: Football, အားကစားသတင်းများ Tags: Chelsea, Manchester City, Raheem Sterling, transfer news | Comments
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်နဲ့ ပီအက်စ်ဂျီတို့ရဲ့ ပစ်မှတ် ဗီတင်ညာ [ Vitinha ] ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ? Vitinha ကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဦးဆောင်နေပြီး ဒီကွင်းလယ်ကစားသမားကို ‌ဦးစားပေး ပစ်မှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ စာချုပ်ပါ လျော်ကြေး ယူရို သန်း ၄၀ နဲ့ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေးက ယူနိုက်တက်၊ ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းနဲ့ ဘာစီလိုနာ အပါအဝင် ဥရောပထိပ်တန်းကလပ် အများအပြားရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိထားပါတယ်။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ အရင်က ၂၀၂၀/၂၁ ရာသီတုန်းက ဝုဗ်အသင်းမှာ အငှားနဲ့ ကုန်ဆုံးခဲ့ဖူးပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ပေါင် ၁၇ သန်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ အခွင့်အရေးကို